Singapore Management - စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာများ
တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ ယခင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အတုခိုးပြီး ထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ ယခုအနေ အထားမှာတော့ ပြန်လည် အတုခိုးသင့်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေပါပြီ။ နောက်ကျနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ဖွံ့ဖြိုးပြီး/ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ရယူစေနိုင်တာမို့ အာရှကျား (၄)... More
Strategic Management - မဟာဗျူဟာကျကျ စီမံခန့်ခွဲမှုများ
မတူညီတဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကောင်းမွန်သာလွန်တဲ့ Management (စီမံခန့်ခွဲမှု) ကြောင့်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ နိုင်ငံ၊ တူညီတဲ့ ဈေးကွက်၊ တူညီတဲ့ ခေတ်ပြိုင်မှာ မတူညီစွာအောင်မြင်စေမှုဟာ၊ Management ကြောင့်ပါပဲ။ Management မှာ ဘာအချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသလဲမေးရင်- အဓိက အသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဒီအချက်တွေနဲ... More
ISO Management - ISO လုပ်ငန်းခွင် စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနည်းများ
If you can't "Manage" the "Things" . . . the "Things" will "Manage" you! ကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို စီမံခန့်ခွဲမှုမလုပ်နိုင်လျှင် . . . ထိုအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို ခံရပေလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို အနိုင်ယူစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် ( 5-S လုပ်ငန်းခ... More
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်၊ စင်္ကာပူမှာ လီကွမ်ယုကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံကြီး ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ လူတွေဖန်တီးထားတဲ့ ငွေ၊ အရာဝတ္တုတွေကတော့ လူတွေရဲ့ကန့်သတ်ချက်ထဲမှာ ရှိနေကြမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ အဲ့အရာတွေကို တိုးတက်လာအောင်၊ ဆန်းသစ်လာ... More
Personality (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး) • Knowledge (ပညာ) • Skills and Abilities (ကျွမ်းကျင်မှု/ စွမ်းရည်) • Experiences (အတွေ့အကြုံ) • Learning (လေ့လာသင်ယူမှု) • Pr... More
Teamwork - အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ သဘောတရားဟာ မတူညီတဲ့ အရာများစွာကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီး တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်ထောင်ချီ ပျံသန်းနေတဲ့ (ဆောင်းခိုဌက်တွေဟာ အုပ်စုလိုက် ပျံသန်းကြသလို) (ရေဆန်ပြန်တက်နေတဲ့ ငါးတွေဟာ အုပ်စုလိုက်ရှေ့ဆက်ကြသလိုပဲ) လူတိုင်းအသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ပိုမု... More
ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်လာတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ မတူညီစွာ ယှဉ်ပြိုင်ဦးတည်နေကြသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အောင်မြင်တဲ့ လူတိုင်းနီးပါး လက်ခံထားတာကတော့ "Change ပြောင်းလဲခြင်း" ရဲ့နောက်မှာ "Change အခွင့်အရေး" ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Change ပြောင်းလဲမှုယူတဲ့အခါမှာ Bigger Chal... More
JD for Supervisor - ကြီးကြပ်စီမံခန့်ခွဲသူ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများ
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု၏ အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်နေခြင်းမှာ Supervisory Management ၏ အထက်နှင့် အောက်ခြေ ရဲ့ အရေးကြီးသည့် ကြားခံစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို ပေါင်းကူးပေးမှု၏ မဟာဗျူဟာကောင်းမွန်မှုကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရုပတ်ခွေ စက်ဝိုင်းပုံစံ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ သဘောတရားအရ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကြီးထွားလာခြင်းသည် လုပ်ငန်း၏ဖွံြ့... More
"Poor Performance Management" (လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ကျဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
သင်ပေးသင်ယူရအခက်ခဲဆုံး ခေါင်းစဉ် တစ်ခုကို ပြောပါဆိုရင် Managing Poor Performance လို့ပြောပါမယ်..။ တကယ်ခက်တဲ့ ဘာသာရပ်ပါ..။ စာတွေ့ တစ်ခုထဲနဲ့ကတော့ ဘယ်လိုမှကို အဆင်မပြေတာပါ.။ လက်တွေ့မှ လ... More
မန်နေဂျာညံ့ဖျင်းမှု ၉-ချက်ကြောင့် ၀န်ထမ်းကောင်းများအလုပ်ထွက်
"မန်နေဂျာညံ့ဖျင်းမှု ၉-ချက်ကြောင့် ၀န်ထမ်းကောင်းများအလုပ်ထွက်"
ယနေ့ဝန်ထမ်းလောကရဲ့ ငြီးငြူသံက တော့ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝန်ထမ်းရှားပါး ခြင်းပါပဲ။ တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ့်သတ်မှတ် ချက်စံရဲ့ တစ်ဝက်ပါပါစေ ခန့်မယ်။ လုပ် ရင်းနဲ့ သင်ပေးမယ်ဆိုတ... More
Leaders from Leaders (ခေါင်းဆောင်ဟောင်း များမှ ခေါင်းဆောင်လောင်းများသို့)
Leaders from Leaders (ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများမှ ခေါင်းဆောင်လောင်းများသို့)
ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများမှ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများသို့ ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်ခဲ့သော စီးပွားရေး ခေါင်းဆောင်များ၏ သူတို့၏ အောင်မြင်ရေးရာ ခေါင်းဆောင်မှုအသိပညာတချို့နှင့် ဘ၀အတွေ့အကြုံကောင်းများအား Entrepren... More